युके आम निर्वाचन: एक सरल परिचय - BBC News नेपाली
युके आम निर्वाचन: एक सरल परिचय
युकेमा आगामी डिसेम्बर १२ तारिखमा आमनिर्वाचन हुँदैछ।
देश सञ्चालनका लागि सरकार गठन गर्न गरिने आमनिर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनु पर्ने हो। तर अबको निर्वाचन सन् २०१५ पछिको तेस्रो आमनिर्वाचन हुनेछ।
निर्वाचन के का लागि?
संसद सदस्यका रूपमा कूल ६५० जना निर्वाचित हुनेछन्, जसले प्रतिनिधिसभामा कानुन तथा नीतिहरूबारे निर्णय गर्नेछन्।
सांसदहरू हाउस अफ कमन्स भनिने लण्डनस्थित संसदको दुईमध्ये तल्लो सदनका लागि चुनिन्छन्। ब्रिटिश सरकारको मुख्य सचिवालय लण्डनमा अवस्थित छ।
ब्रिटेनमा आउँदो डिसेम्बर १२ तारिखमा आमनिर्वाचन हुने
मतदाताहरूको प्राथमिकता के, ब्रेक्जिट की राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा?
आमनिर्वाचन अघिका निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्र, प्रतिरक्षादेखि लिएर प्रहरी व्यवस्थासम्मका विषयहरूमा आआफ्ना विस्तृत प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। ब्रिटिश राजनीतिक दलहरू समान राजनीतिक आस्था भएका मानिसहरूको समूह हो जो सत्तामा पुग्ने उद्देश्यका साथ संगठित भएका हुन्छन्।
पछिल्लो मत सर्वेक्षणहरूका अनुसार युकेका मतदाताहरूले सबैभन्दा धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने मुद्दाहरूमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको छ।
एनएचएस भनिने ब्रिटेनको नि:शुल्क सार्वजनिक राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा र आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषय सन् २०१५ को आमनिर्वाचनका बेला मतदाताहरूले सबैभन्दा धेरै ध्यान दिएका मुद्दाहरू थिए। त्यसबेला युरोपेली संघ, इयु, निकै कम चासोको विषय थियो।
तर अहिले युरोपेली संघबाट ब्रिटेन बाहिरिने ब्रेक्जिट प्रकृया हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो मुद्दाको रूपमा देखिएको छ।
आमनिर्वाचन अहिले किन हुन लागेको हो?
सन् २०१६ मा जनमत संग्रह मार्फत ब्रिटेनले युरोपेली संघको सदस्यता परित्याग गर्ने निर्णय गरेको थियो जुन अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन।
यो विषयमा राजनीतिज्ञहरू विभाजित रहेका छन्। कोही युके चाँडोभन्दा चाँडो इयुबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्, कोही यो विषयमा अर्को जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्छन् त अरूहरू ब्रेक्जिटलाई समग्रमा नै खारेज गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछन्।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनसँग नयाँ कानुनहरू पारित गर्नका लागि संसदमा पर्याप्त सांसदहरू छैनन्। समय अगावै हुन लागेको नयाँ आमनिर्वाचनबाट उनले आफ्नो कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदहरूको संख्या बढ्न सक्ने आश गरेका छन्। त्यसो हुनसकेमा उनलाई आफ्नो ब्रेक्जिट योजनामा अघि बढ्न सहज हुनेछ।
नियम अनुसार घटनाक्रम अघि बढेको भए युकेमा आगामी आमनिर्वाचन सन् २०२२ मा हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले केही हप्तादेखि नै छिटै निर्वाचन गराउन प्रयास गरिरहेका थिए। अहिले आएर विपक्षी पार्टीहरूले पनि समय अगावै हुने आमनिर्वाचनका लागि आफ्नो सहमति दिएका छन्।
मतदान कसरी हुन्छ?
आमनिर्वाचनका बेला युकेका चार करोड साठी लाख मतदाताहरूलाई ६५० निर्वाचन क्षेत्रहरूमा आआफ्नो क्षेत्रबाट सांसद निर्वाचित गर्न भनिन्छ।
१८ वर्ष र त्योभन्दा माथिको उमेरकाहरूले मतदान गर्न पाउँछन्। मतदाताहरूमा ब्रिटिश नागरिक वा कमनवेल्थ (राष्ट्रमण्डल) वा आयरल्याण्ड गणतन्त्रका निश्चित योग्यता पुगेका सूचीकृत मानिसहरू पर्दछन्।
युवाहरूको दाँजोमा वयस्कहरूले मतदानमा सहभागीता जनाउने सम्भावना बढी रहन्छ। सन् २०१७ को आमनिर्वाचनमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ५९ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए भने ६० देखि ६९ उमेर समूहका ७७ प्रतिशत मतदानमा सहभागी भएका थिए।
स्थानीय निर्वाचन केन्द्रहरूमा गएर मतदान गर्ने गरिन्छ र त्यस्ता मतदान केन्द्रहरू विद्यालय र चर्चहरूमा स्थापना गरिएको हुन्छ।
मतदाताहरूले मतपत्रमा आफ्नो रोजाइको उम्मेदवारको नामसँगै रहेको स्थानमा क्रस चिन्ह लगाउँछन् र सिलबन्दी गरिएको मतपेटिकामा त्यस्तो मतपत्र खसाल्छन्।
विजेताको चयन कसरी हुन्छ?
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार हाउस अफ कमन्स अर्थात ब्रिटेनको प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित हुन्छ।
जित हासिल गर्नका लागि एकजना उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीहरूभन्दा बढी मत ल्याए पुग्छ। तिनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कूल मतदाता संख्याको आधाभन्दा कम मत प्राप्त गरेपनि हुन्छ।
धेरैजसो सांसदहरूले कुनै न कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् तर कोही कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा पनि निर्वाचनमा खडा भएका हुन्छन्।
प्रतिनिधिसभामा आधाभन्दा बढी (३२६) सांसद विजयी भएको पार्टीले सामान्यतया सरकार गठन गर्ने गर्दछ। युकेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार राष्ट्रिय मत संख्याको ५०% भन्दा निकै कम मतप्राप्त गरेपनि पार्टीहरू सत्तामा जान सक्छन्।
यदि कुनै पनि पार्टीसँग सांसद संख्याको बहुमत नभएको अवस्थामा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको दलले अरू एक वा एकभन्दा बढी दलसँगको साझेदारीमा गठबन्धन सरकार बनाउन सक्छन्।
प्रधानमन्त्री मतदाताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चयन हुँदैनन्। उनलाई विजयी पार्टीका सांसदहरूले चुन्ने गर्छन् र महारानीले सांसदहरूको सिफारिस बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु उनको कर्तव्य हो।
को को सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउँछन्?
निर्वाचन हुने दिन अठार वर्ष उमेर नाघेका प्राय: मानिसहरू उम्मेदवार बन्न पाउँछन् तर तिनीहरू ब्रिटिश नागरिक वा युकेमा स्थायी बसोबास गर्ने र निश्चित योग्यता पुगेका कमनवेल्थ वा आयरल्याण्ड गणतन्त्रका नागरिक हुनुपर्नेछ।
तिनीहरूले उम्मेदवारी दर्ताका लागि पाँचसय पाउण्ड जमानत राख्‍नु पर्छ । र उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको मध्ये कम्तीमा ५% मत हासिल नगरेमा उक्त जमानत रकम जफत हुन्छ।
उम्मेदवारहरूले अन्य केही शर्तहरू पनि पालना गर्नुपर्छ - कैदी, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, प्रहरी तथा सैनिक सेवामा बहाल रहेकाहरूले उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्।
निर्वाचनको नतिजा कहिले घोषणा हुन्छ?
आमनिर्वाचनको दिन बिहानको सातबजेदेखि रातिको दशबजेसम्म मतदान गर्न पाइन्छ। मतदानको नतिजा रातभरी र भोलिपल्ट समेत घोषणा भैरहन्छ।
सम्पूर्ण नतिजा प्रकाशित भैसकेपछि विजयी पार्टीका नेताले बकिंघम राजदरबार गएर नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि महारानीसँग अनुमति लिने गर्दछन्।
यो औपचारिकता पूरा गरेपछि ती नेता ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको परम्परागत निवास- लण्डनस्थित टेन डाउनिंग स्ट्रिटमा जान्छन्।
सामान्यतया नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारी निवासको बाहिर उभिएर आगामी वर्षहरूमा आफ्नो पार्टीले गर्ने काम र योजनाहरू सहित भाषण दिने गर्दछन्।
कोभिड नियन्त्रणमा "नयाँ कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ": स्वास्थ्यमन्त्री
एकै दिन २२५ जनाको मृत्यु पुष्टि, सङ्क्रमण सङ्ख्या पनि उच्च
भिडिओ, कोभिड महामारीमा आमाको मुख कसरी हेर्ने?, समयावधि 3,07
काठमाण्डू उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप: मे ३१ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द